शुभकामना - AahaSanchar
Home आहा बिचार शुभकामना
दशाँई पर्वकी नाइका हुन् । गाइक, नाइक र खलनाइक को को हुन ? पाइक पर्नेहरूले जिज्ञासा राख्दा हुन्छ । यो आश्विन शुक्ल पक्षको प्रतिपदादेखि दशमी र त्यसपछि कोजाग्रत पूर्णीमासम्म मानिने विशेष पर्व वा उत्सव हो । यसलाई हिन्दुहरूको महान पर्व पनि भनिन्छ । नवौँ दिनसम्म दुर्गाको पूजा गर्नका लागि आश्विन शुक्ल प्रतिपदाका दिन घट(कलश) स्थापना गर्ने काम परम्परादेखि चल्दै आएको हो । यसरी राखिएका जवारा प्याँला भएपछि दसौँ दिनमा क्यापेहरूले पम्पुरामा र अक्यापेहरूले टुप्पिमा कोच्ने गरिन्छ । हाम्री नाइका बौत नाम्री छिन् । यिनीले धेरैलाई कमाउँने, जमाउने, समाउने तथा रमाउनेहरूलाई खुप्पै औसर दिएकी छिन् । बैगुणीहरूले बुक्लो आरुप लाउछन् र मात्र । यताकता हुन्ना खानेहरूले उनी गइसकेपछि गुँ नासो सुनाउँछन् । चित्त नबुज्नेहरूले मुखामुख भनोस् त्यो प बादुर । पिठपछि कुरा काट्ने कात्तुरहरू उन्का सामु ओट खोल्लन सके पो ? बिचारी, यिनीले कसैलाई झेज्जो नमान्ने, कस्तो भन्दा ः लाटो–गµो, केरो–केटी, बुरो–बाटुल्लो, पाउँना–पाउनी, छाउँना–छाउँनी, गन्या–मान्या, ठूल्लया–ठाल्लया, बेर्रया–बार्रिया, टेर्रिया–टार्रिया, भित्रा–भाइरा, वरट्ेटा–परेट्टा, तल्लेटा–माथेट्टालाई कत्नाम्रो नेरो मान्ने । यति गर्दा पनि कोहुने बैगुणीले फत्तुर लाइकन नाइकालाई यस्तो गाना गाउँन लाउछन् ः क्यारी जाम भेट्न म धर्तिका माइती घरमा । टिठौमर्नु यिनीले ठूलो–स्यानो, हुँने–नहँुने, रुने–नरुने, चुने–नचुने, छुने–नछुने सबैलाई एउटै आँखोले च्याइछिन् । अबदेखि त्यस्तो गनासो नाइकाले सुन्न नपरोस् भन्ने शुभकामना छ ।
प्याँलाको सट्टा हर्रया जवारा कोच्नसके चिन्तन र सोचाइमा नविनता तथा गाम्भिरता आउँथ्यो कि हउर । हजुरको लाज छोप्ने टाला, प्यारमा जुदाउने गाला, त्यारमा लाउने माला, कानमा झुराउने बाला, अरुलाई सिकाउने चालामा परिवर्तन आकैछ । यत्तिमात्रै होइन हउर ? गाइकले नइयाँ भाका गाकैछ, भोकाले नुन, बोकाले सुन खाकैछ, व्याधाले तीर लाकैछ, उताको धन आकैछ, यताको तन गाकैछ, नाइक थल्लिए सनाइक हल्लेकैछ । ह्याँई रोजगारी देउ भनिकन चर्को भाषण गर्नु धिक्कार छ किनकि विदेश छिर्नेको लर्को लाकैछ । दिदीबैनाले आँङ्नमा मखमली र हजारी फुलेन भनिकन चुक्चुकाउनु किन पर्यो ? हरर वासना छर्दै विदेशी माला आकैछ । किसानले खेत बाँज्जियो, ढिकीजाँतो र ठेकीभराँन थार्रियो भनिकन पुल्किनु आवश्यक छैन । मैन खाबो र निदारमा टाँस्ने चाँउलौं गेरो खोज्न घर भाइर जानै पर्दैन । छाँटिकन ठाँट पारिर्या चाँउला थैला भान्सामा आकैछ । अन्नौ राजा कोदो राजतन्त्रसँगै सतिगएता पनि तेलौं हर्जा छैन् । आगो ताप्न मुरा सल्काउनु पर्दैन् न त कुरा सुन्न बुरा चाइन्छ । जर्मिदै कुरा ओइर्याउँनेको ताँती भेटिन्छ । बरु चिन्ता नमान्नु पर्ने यो छ कि कोदिन हजुरका बाज्याको साइनो मेटिन्छ ? क्याउरा गर्नु हुँदो हउर ह्याँ, जान्ने, मान्ने, हान्ने, बान्ने, तान्ने कसैको कमी छैन् भन्नु हुन्च । उइता हो नि ? तोरी फुल्नेताका आँखा फुट्या बल्लले सँदै प्याँलो देखेइनी ।
फरक यत्ति हो हउर । कतिले त्यार अघि ट्यार पार्छन् भने कतिले त्यार पछि । खुर जस्ले जैल पारेता पनि यसको मूलध्यय कालाँमुख नपर्ने नै हो । त्यार मान्ने पनि कयौँ तर्काहरू रैछ भन्नु हुन्च । कतिले जवरा लाइकन त कतिले हँवारा लाइकन नाइकाको पूजाआजा गर्दांरचन् । त्यार प्यारो कि प्यार ? भनिकन कसैले सोदेमा म त ट्यार भन्ने वाला छु हउर । व्याघियौं प्यार भन्दा पछियौं मत्व झै त्यारपछियौं ट्यारको मत्व अलि जर्को छ । यसको खुलासा लोभपारखी दम्पतिले सन्तानलाई साक्षी राखी गरेको सम्बन्धविक्षेदले पुस्टि गरेको छ । सन्तान प्राप्तीका लागि धुइँपत्ताल पछी सुत्केरी भत्ता बिनै पाइकन हुर्काका ज्ञानी सन्तानले माबाउलाई बृद्धाश्रममा गोठ सारी बाल्याकालको सारा पैचो तिर्छन् । मुलुक अँध्यारो मुक्त भएकोले अँध्यारो कहाँ पाउनु हउर ? नक्कली सुकुमबासीको हमरा रोप्ने ठाउँ नहोला । सबैको दुरदशा देखिकन दुर्गा मातौ आत कति रोला ? अब चाँर्रै स्याना, ठूला, गन्यामान्या, भित्रभाइरा सबै खेरबोटल भइकन एउटो सरसल्लाह गरेल्नुपर्छ । हजुरको आपूmखुशी टिको दक्षिण दिएमा चेलीबेटी र इस्टमित्र रिसाउने हउर । उनीहरू रिसाए क्याफाँर्दो ? अर्को दसाँईमा दामै जोगिन्थ्यो होला । टिको दक्षिणामा करले भेट्ला कर छल्दा अक्तियारले पाला पर्ला भन्ने डर प छ हउर । त्यसैले जवारा–हँवारा कोचिकन हुन्छ कि नाइकालाई नाम्रो खुशीराजीसित बिदाई गरौँ । गयो दशाँई ऋण बोकाई भन्ने आरोपबाट जोगाऔँ । देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरूमा विजया दशमी २०७५ को हार्दिक मंगलमय शुभकामना !
Previous post जनप्रतिनिधि ज्युहरु वैशाख ३१ गते याद छ ?
Next post सहिद लोकेन्द्र बटालाको स्मृती दिबस मनाईयो
आफ्नो एफएम रुकुम अनलाईन प्रशारणमा
भूमेमा नेकपाको वडा कमिटि पनि टुंगो
संभावना बोकेका पर्यटकीय स्थलनै सूचीमा समेटिएनन्